कलिली लेखिका - [2008-06-07]
१४ वर्षको उमेरदेखि लेख्न सुरु गरेकी थिइन् उनले । शिक्षकले पढाइरहेका बेला उनी कक्षाकोठाको अन्तिम बेन्चमा बसेर लेख्थिन्, केरमेट गर्थिन् । र, फेरि लेख्थिन् । त्यसैगरी लेख्न थालेको चार वर्षपछि नै उनलाई कैयौंले नयाँ जेके रोलिङ भन्न थालिसकेका छन् ।
भर्खरै १९ वर्ष पुगेकी क्याथरिन ब्यानरको फेन्टासी उपन्यास 'दि आइज अफ ए किङ' प्रकाशित भएको छ । क्याथिरिन आफ्ना अभिभावकका साथ क्याम्बि्रजमा बस्छिन् । रमाइलोका लागि लेख्न थालेको उनी बताउँछिन् । उनको उपन्यास बजारमा निकै लोकपि्रय भएको छ । यसको फिल्म बनाउनेबारेमा पनि सोच भइरहेको छ । 'सानैदेखि म कथा पढ्न र लेख्न मन पराउँन्थंेँ,' उनी भन्छिन् । 'द लाइन, 'द विच एन्ड द वार्डव' उपन्याले लेख्न प्रेरणा दिएको उनी बताउँछिन् ।
आफ्नो लेखनका बारेमा बताउँदै उनी भन्छिन्, 'म सानै छँदा कागजका खाली-पाना जम्मा गर्थेँ र ती पानामा चित्र र कथाहरू लेख्थेँ । पुस्तकाकार बनाउँथेँ, मैले १४ वर्षको उमेरदेखि लेख्न सुरु गरेँ । स्कुलबाट र्फकेपछि र बिदामा लेख्थेँ ।' कहिलेकाहीँ सोचेको कथा लेख्नुअगाडि नै नहराओस् भनेर उनी नोट राख्छिन् । ं'लेख्न रमाइलो थियो । मसित कथाको एउटा आइडिया थियो । कस्तो कथा बन्छ भनेर यसलाई मैले लेखेर हेरेँ,' आफ्नो पुस्तकको राज उनले बताइन् । उपन्यास लेखिसकेपछि क्याम्बि्रजमा आयोजना गरिएको एक पुस्तक-प्रदर्शनमा उनी पुगिन् । प्रकाशकहरू पुस्तकका बारेमा गफ गरिरहेको सुनिन् । प्रकाशककै छेउमा गइन् । र, भनिन् 'के १६ वर्षदेखि व्यावसायिकरूपमा लेख्न सुरु गर्नु ज्यादै छिटो हुन्छ ?' प्रकाशकले सोेधे, 'केही लेख्नुभएको छ ?' तुरुन्तै जवाफ दिइन्, 'लेखेको छु ।'
पुस्तकको पाण्डुलिपि पठाउने सम्झौता भयो । ए-लेभलको परीक्षा दिएपछि उपान्यास प्रकाशन सम्झौतामा हस्ताक्ष्ार गरेपछि क्याथरिनले भनिन्, 'मैले सधंै लेखक बन्ने सपना देखेँ । तर, मेरो पुस्तक प्रकाशित गर्छु भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ ।' आफ्नो उपन्यासका बारेमा पाठकको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कौतुहलताले अहिले उनलाई सताइरहन्छ । उनका परिवारमध्ये लेखन पेसामा कोही पनि लागेका छैनन् । 'दि आइज अफ ए किङ' उपन्यासको तीन भाग निकाल्ने उनको योजना छ । दोस्रो भाग उनले लेखिसकेकी छिन् । र, तेस्रो भाग लेख्न सुरु गरिसकेकी छिन् । सेप्टेम्बरदेखि क्याम्बि्रजमा अंग्रेजी साहित्य पढ्ने उनको योजना छ ।
क्याथरिनको उपन्यासका सम्पादक लरेन बकल्यान्ड भन्छिन्, 'उनी अत्यन्त प्रतिभाशाली लेखिका हुन् । उनको प्रतिभा हेर्नलायकको छ, उनले उत्कृष्ट उपन्यास तयार पारेकी छिन् । उपन्यास सलल बगेको छ, पात्रहरू रमाइला छन् । पाठकलाई पढाँैपढाँै बनाउन सक्ने क्ष्ामता उपन्यासमा छ । उनले ह्यारी पोटरकी लेखिका जेके रोलिङको स्थान लिन सक्छिन् ।' 'दि आइज अफ ए किङ' मा जादुगरी विश्वका पात्रहरूको अद्भूत चमत्कारी देखाइएको छ । यसका मुख्य पात्र किशोर लियो नर्थ हुन् । उनी मालोनियामा बस्छन् । मालोनिया क्रान्तिको अन्तिम संघारमा छ ।
उपन्यास सुरु हुँदा लियो जबरजस्ती सैनिक तालिम लिनुपरेकोमा आक्रोशित हुन्छन् । यसै क्रममा उनले एउटा अनौठो पुस्तक फेला पार्छन् । पुस्तक छुनेबित्तिकै उनमा अनौठो किसिमको शक्ति आउँछ । पुस्तकमा शब्दहरू आफसेआफ आउन थाल्छन् । ती शब्दले लियोको पारिवारिक जीवनका सबै कुराहरू बताउँछन् । मालोनियाको इतिहास पुस्तकमा हुन्छ । इंग्ल्यान्डका दुई किशोरकिशोरी रायन र एनाको कथा पनि पुस्तकमा समाविष्ट हुन्छ । पुस्तकले सुरुसुरुमा त लियोलाई सामान्य जीवनबाट मुक्ति दिन्छ । तर, आफूले अचानक ट्रयाजेडीको सामाना गर्नुपरेपछि पुस्तकमा भएको कथा आफ्नै जीवनसँग अत्यन्तनिकट रहेको लियोले अनुभव गर्छन् । यसले मालोनियालाई समेत सदाका लागि परिवर्तन गरिदिन्छ ।